पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र ३ गते बुधबार, भोली तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ! - Sacho Post
२०७७ भाद्र २, मंगलवार १०:१० बजे
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) रचनात्मक कार्यका क्षेत्रबाट उत्तम लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ती समयले बिशेष साथ दिनेछ । साजेदारीकार्य बाट बिशेष लाभ प्राप्त रहनेछ अध्यन अध्यापनमा लगाइएको समयको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । यात्रामा भने बिशेष साबधानि अपनाउनु राम्रो हुनेछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) बल तथा प्रराक्रममा बृद्धिहुनेछ । मित्रजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्तरहनाले मन प्रशन्न रहनेछ सामान्य यात्राकारक समय रहेकोछ । अधुराकार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ । पूरानो लगानि उठाउन समेत समयले साथदिनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ
बुधबार मध्यरातदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा : के गर्न छुट, के गर्न बन्देज ? (सूचनासहित)